traffic Rider | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » traffic Rider
traffic Rider APK ကို
ယာဉ်အသွားအလာပြိုင်ကားသမား၏ဖန်တီးသူကနေနောက်ထပ်လက်ရာ။ ဤအချိန်, သင်ကပိုပြီးအသေးစိတ်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ဘီးနောက်ကွယ်မှရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအဟောင်းကျောင်းကိုပျော်စရာနှင့်ရိုးရှင်းဆက်ပြီး။
traffic Rider အပြည့်အဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode ကိုပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမြင်ရှုထောင့်ဖြည့်စွက်အားဖြင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆငျ့ဖို့အဆုံးမဲ့ပြိုင်ကားအမျိုးအစားကြာ, ပိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်များနှင့်စစ်မှန်သောဘဝမှတ်တမ်းတင်ထားသောစက်ဘီးအသံ။ ချောမွေ့ Arcade ပြိုင်ကားများ၏အနှစ်သာရရှိပေမယ့်လာမယ့်မျိုးဆက်ရဲ့ shell ကိုဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode ကိုအတွက်မစ်ရှင်ရိုက်နှက်အသစ်စက်ဘီး upgrade နှင့်မဝယ်, အအသွားအလာကျော်တက်သည့်အဆုံးမဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းများ၌သင်တို့၏ဆိုင်ကယ်စီး။ ,
အခုတော့တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူလမ်းများ hit ဖို့အချိန်ပါ!
- ကနေရှေးခယျြဖို့ 29 မော်တော်ဆိုင်ကယ်
- 70 + မစ်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေရေး mode ကို
- အွန်လိုင်းဦးဆောင်နှင့် 30 + အောင်မြင်မှုများ
- 19 ဘာသာစကားတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှု
- အပိုမြန်သငျသညျစီး, ပိုရမှတ်များသင်ရ
- 100 kmh ကျော်မောင်းနှင်သည့်အခါဆုကြေးငွေရမှတ်များနှင့်ငွေသားရဖို့နီးကပ်စွာအသွားအလာကားများအပေါ်သို့ရောက်လာမည်
- အပိုရမှတ်များနှင့်ငွေသားရဖို့ wheelies သလား
*** အဘယ်သူမျှမ timer, အဘယ်သူမျှမဆီ *** ရုံစင်ကြယ်သောအဆုံးမဲ့ပျော်စရာ!
traffic Rider သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်အတူပုံမှန် updated လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်နဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုစွန့်ခွာဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
- အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဘီး Added
79.89 ကို MB